Injineeriyadda - Page 3 - Geofumadas
CAD "Engineering". Barnaamijka injineernimada madaniga ah
BiblioCAD, download AutoCAD blocks iyo qorshayaasha
BiblioCAD waa goobta oo ku jira qadar qiimo leh oo faylasha diyaar u ah soo dejinta. Waxaad si fudud u xallin kartaa marka aad samaynayso mashruuc ama aad nala siinayso fikrado cusub sidii loo horumarin lahaa. Aynu aragnay kiisaska qaarkood: Waxaanu qabannaa faahfaahin ka mid ah xayawaanka cagaarka ah, oo leh aragti isbedel, gooye iyo dhir. Waxaan u baahannahay blocks dad, geedo ama ...
Companion samaynta ee, complement weyn oo Civil 3D
Tani waa mid ka mid ah xalal dhowr ah oo ay bixiso Eagle Point, isla shirkadaas oo bilawday bilaha sagaalaad ee na soo jiidatay waxkasta oo ah AutoCAD ma samayn. Kadib wax yar kadib, oo uu rabay in uu u hoggaansamo wax kasta oo wax qabad ah, shirkadu waxay ku noqotaa ujeedkeeda hore, ka dibna AutoDesk horayba ...
gvSIG Fonsagua, GIS ee naqshadaha biyaha
Waa qalab qiimo leh mashaariicda loogu talo galay biyaha iyo fayadhowrka ee qaabeynta hay'adaha wada shaqeynta. Generic wuxuu la shaqeynayay natiijooyinka Eupel oo wanaagsan, in kasta oo uu jiro xaddidnaanta geeddi-socodka is-waafajinta isbedelka. Ka dib markii ay raadinayeen sababaha gvSIG iyo Iskaashigu ay u muuqdaan kuwo aan muuqan ...
Alibre, ugu fiican ee 3D design farsamo
Alibre waa magaca shirkad, magaciisuna asal ahaan ka soo jeedo erayga latiriga ah ee Liberia, laga bilaabo halka laga helo xorriyadda, liberalism, libero; In yar oo dareenka xorriyadda. Iyo ujeeddada shirkadani waxay ku saleysan tahay bixinta alaab tayo sare leh qiime aad u qiimo badan. Taariikhda ayaa ina tusaysa in ...
2010 Premium Engineering Solo CD
Munaasabadda lagu fulinayo sanadaha 5, bogga Soloingenieria.net wuxuu diyaariyey xeelado kobcin, waaritaan iyo faafin ah oo ku soo jeeday subaxnimadayada. Marka ugu horeysa, waa habka CD-ga oo loo yaqaan Solo Engineering Premium 2010, oo ka kooban soo-ururin shaqooyinka ugu fiicani ee sanadaha 5 lagu daro ...
GaliciaCAD, kheyraad badan oo bilaash ah
GaliciaCAD waa goob lagu ururiyo qadar wanaagsan oo waxtar leh oo ku saabsan injineernimada, farshaxanka iyo dhismaha. Inta badan ilaha jira waa isticmaalka lacag la'aan ah ama lacag la'aan ah, inkastoo qaar ka mid ah waxay u baahan yihiin xubin, xubin ka ah sanadlaha ah ee 20 Euros oo ka mid ah CD la blocks 8,000. Haddii ay tahay shuraako, had iyo jeer ...
In ka badan 60 Autolisp habka loogu talagalay AutoCAD
Carrab la'aan waayo beddelaad iyo hawlgallada 1. Beddelaan cagaha u mitir iyo qeybsanaan caadiga ah Tani ahbaa la AutoLISP, oo noo ogolaadaa in loogu badalo qiimaha galay ka cagood leh mitir iyo qeybsanaan ku xigeenka, waxaa natiijada la soo bandhigi on line amarka. Halkan waxaan sidoo kale u isticmaali shaqada CVunit, shaqo this carrab la'aan, qiyamka diinta ka helay, file acad.unt ku ...
AutoDesk 3D Dwg
Arivte, wax badan oo loogu talagalay injineerada madaniga ah
Arivte.com waa bulsho, oo leh gaadiid badan oo ka socda Peru, laakiin guud ahaan xiisaha guud ee meelaha kala duwan ee dhismaha madaniga. A yara adag arrimaha helaan, maxaa yeelay, format waa madal la subforums, saamayn ku kala firidhsan of content laakiin mar diiwaan gashan iyo in la helo dunta ...
Injineernimada, GIS iyo Maareynta Xaafadda: Koorsooyinka soo socda
Ugu yaraan waa kuwan koorsooyinka yihiin Latin America socda, hadda waa la heli suuragalnimada in iyaga codsanaya: Suuqyada Dabaqyada: Event: Hababka suuqyada dalka Dabcan taaban karo ee Latin America Date: 19 in 23 October 2009 Location: San Jose, Costa Rica Kooban: Dabcan waxaa loogu talagalay in baro ...
Baridda CAD / GIS, Engineering, Maamulka Land
TopoCAD, in ka badan Topo, in ka badan CAD
TopoCAD waa qaab asaasi ah, laakiin xal udub oo loogu talagalay topotography, sawir gacmeedka CAD iyo qaabeynta injineernimada; inkasta oo uu ka badan yahay taas oo ah horumar ah in uu qaaday in ka badan 15 sano ka dib dhalashada ee Sweden. Hadda waxaa la waraabiyaa aduunka, luuqadaha 12 iyo dalalka 70 inkastoo aysan u muuqan in ay ku guuleysteen ...
AutoDesk Bentley Systems Dgn Dwg ESRI GPS KML My aragti ugu horeysay SHP
ArcGIS-ESRI, GPS / Qalabka, Engineering, topografia
Ingeosolum wuxuu soo saaraa wargeys
Dhowr bilood ka hor shirkadda Ingeosolum waxay soo saartay fariin elektaroonig ah oo ay ku wargalinayaan wax ka mid ah waxa ka dhacaya aagga injineeriyadda, gaar ahaan kuwa yaryar. Tani waa shirkadda wadista ee Geo5, oo ah FINE Software, oo aan dib u eegay wakhti kale. Daabacaaddan labaad waxay sameynayaan ...
6 daqiiqado kalsooni ah ConstrucGeek
Waxaan kugula talineynaa in la qaato daqiiqad ay ku ogaanayaan in blog, taas oo iminka ku socota sanad shaqo. Anigu waxaan tixraacayaa ConstrucGeek, lixda daqiiqo ee aad filaysay inaad udiyaarinayso akhriska juqraafi cusub waa in uu maalgaliyo blogkan. Waxaa jira laba fursadood oo kaliya: inaad fahamsan tahay in mawduuca CAD ee la xidhiidha injineerku aanu ahayn ...
blog My aragti ugu horeysay
AutoCAD-AutoDesk, Engineering, tabo cusub, aragti ugu horeysay
Seminar on PowerCivil Latin America
Engineer Edmundo Herrera la bixiya doona seminar ku saabsan ka shaqeynayaan in uu leeyahay wax soo saarka Bentley ee loogu talo galay Latin America, waxaa asal ahan sida PowerCivl Latin America, sidii lagu falay kuwii Spain. Date: July 15 2009 Saacadaha: 10: am 00 (Mexico) 12: 00 pm (Argentina) Duration: 1 30 waqti daqiiqo Qiimaha: Macallinka Free:. Edmundo nayaa Herrera PowerCivil waa ...
Baridda CAD / GIS, Engineering, Microstation-Bentley, topografia
PhotoModeler, cabiraada iyo qaabaynta aduunka dhabta ah
PhotoModeler waa codsi ah System EOS, abuuray LEADTOOLS SDK ah, ugu fiican ee aan arkay, abuuri karaan shay iyo goobaha ka sawirrada 3D farsamo Qaabaynta yeedhay sawirka. Anigu waxaan hor mdl ah oo ka shaqaysa la Microstation hadlay, laakiin ay dhacdo in this waxaan ka hadleynaa iyo ...
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 page Next